Madaxweynaha Soomaliland oo kamid noqday dadka saaka codeeyay - Awdinle Online
Madaxweynaha Soomaliland oo kamid noqday dadka saaka codeeyay
Madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi Cabdi oo subaxnimadii hore ee saaka codkiisa ka dhiibtay xarunta hay’adda shaqaalaha oo uu hore uga qaatay kaarka codbixinta, iyadoo guud ahaan dalka maanta looga dareeray doorashada wakiilada iyo deegaanka oo isku sidkan.
Muuse biixi markii uu gaaray xarunta codbixinta waxa uu maray nidaamkii dadka kale u marayeen codbixinta isagoo hawl-wadeenadii ku sugnaa goobta u dhiibay kaarkiisa codbixinta, ka dibna buuxiyey shuruudihii looga baahnaa qof kasta oo codbixiye ah oo muwaadin ah, isagoo qaatay waraaqaha codbixinta kuna riday sanaaduuqda codbixinta oo ah laba sanduuq oo wakiilada iyo deegaanka kala ah,s dia lagu sheegay war kasoo baxay Madaxtooyada Somaliland.
Intaasi kadib Madaxweynaha Somaliland oo la hadlay warbaahinta ayaa dhammaan shacabka kula dardaarmay inay nabad ku codooyeen, isla markaana ay isugu naxariistaan sida dadku u kala jilicsan yihiin.
Madaxweynaha ayaa shacabka faray inay sidii quruxda badnayd ee ay u ololeeyeen inay codkana u dhiibtaan, isaga oo sheegay in caalamku Somaliland indhaha ku hayo.
Next articleShacab ah oo dil iyo dhaawac loogu geystay Jowhar & Banaanbax ka dhashay